Iikhabhathi ze-UV: iingcebiso kunye nezilumkiso | Amadoda aQinisekileyo
Iikhabhathi ze-UV: iingcebiso kunye nezilumkiso
Ii-cab ze-uva zezinye ezizezinye ukuze uninzi lwethu lube nakho bonisa loo tan intle emzimbeni wakho nangaliphi na ixesha lonyaka. Isenza sibonakale sinomtsalane ngakumbi kwaye sinolusu olukhathalelwe ngakumbi nolusempilweni, nangona kufuneka sijonge uthotho lwezinto ukuze lube sempilweni.
Zeziphi izinto ezinokukhuthaza ukusetyenziswa kwendlu ye-UV? Yonke into iya kuxhomekeka emntwini nakwindima yakhe. Nangona ubukhulu becala inesikhumba esenziwe satsho satsho, abantu abaninzi bayagxininisa ekuboniseni olu hlobo lolusu ngaphambi kokuveza umzimba wabo ehlotyeni. Nokuba kugcinwa i-tan unyaka wonke, okanye kuba kukho abantu abangenalo ixesha okanye abangenalo uvelwano ngokutshiswa lilanga.
1 Iingcebiso ngaphambi kokusebenzisa ikhabhathi ye-UV
2 Iingcebiso ngexesha nasemva kweseshoni
3 Izibonelelo zokusebenzisa imitha ye-UV
Iingcebiso ngaphambi kokusebenzisa ikhabhathi ye-UV
Phambi kokungenisa iseshoni yokuqala yemitha ye-UV Uhlobo lolusu oluza kuvezwa kufuneka luthathelwe ingqalelo. Njengomgaqo ngokubanzi, ukuba sicela iiseshoni kwiziko lobuhle, ngumntu ophetheyo kwindawo leyo kumava abonisa uhlobo lonyango ekufuneka ululandele.
Olunye ulwazi olubalulekileyo kukuba Umntu oza kuboniswa kufuneka abudala obusemthethweni. Iminyaka evunyelweyo isusela kwiminyaka eli-18 ubudala kungenxa yokuba ukwenziwa yimitha ye-UV ngaphambi kweminyaka engama-30 kunokunyuka ukuya kwi-75% kwisifo se-melanoma eluswini.
Inani leeseshoni kunye nexesha lokuvezwa liya kuhambelana nohlobo lwethu lolusu. Kuya kufuneka ubeke iseshoni, into eqhelekileyo kukuba kwiifoto zokuqala ezimbalwa ubuncinci beentsuku ezi-4 ezishiyekileyo phakathi kwento nganye. Njengokuba kuthathwa umbala ongaphezulu, kancinci kunokudityaniswa, nangona ubuncinci obuvumelekileyo ubuncinci iiyure ezingama-48.
Onke amaziko makabe nefayili apho idatha yakho yalatha kunye nenani leeseshoni kunye nexesha lokuvezwa kuyo nganye. Ukongeza, kufuneka utyikitye uxwebhu lokuthobela kunye nolwazi, apho uya kuvuma khona ngayo yonke imingcipheko enokwenzeka.
Ukuba uza kusebenzisa i-cabin ye-UV ngendlela ethile, mhlawumbi kuya kufuneka thathela ingqalelo ulusu lwakho. Kuya kunceda ukwazi ukuba ngaba kukho umngcipheko wokubandezeleka luhlobo oluthile lokutsha kunye nexesha lokuvezwa ekufuneka ulithathile kwiseshoni nganye. Ukuba ufuna ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwefototype onayo, ungangena le webhu iya kukubonisa ngokuchanekileyo ngakumbi manyathelo mani ekufuneka uwalandele kwiimpawu zakho.
Ngaphambi kokungena kwikhabhathi kufuneka ugcine engqondweni Ucocekile kwaye usebenza ngokufanelekileyo. Ukungasebenzi kakuhle kuya kuthetha ukuba singangena kwiiseshoni ezingachanekanga kwaye ayisiniki imitha ye-uva phantsi kweemeko.
Nxiba iigogg ukuvala amehlo, susa iilensi zakho zonxibelelwano kwaye ususe zonke iintlobo zobucwebe kunye nezinto zesinyithi. Akunyanzelekanga ukuba usebenzise naluphi na uhlobo lokhuselo lwelanga kunye nawe Ulusu kufuneka lucoceke ngokupheleleyo kwaye lungabikho naluphi na ukhilimu, iziporho okanye iziqholo. Iindawo zangasese okanye zobuso zinokuba novakalelo ngenxa yoko kuyacetyiswa ukuzigquma ukuze zingasokoli.
Iingcebiso ngexesha nasemva kweseshoni
Ungaze ungene kwikhabhathi emanzi xa usiya esikhumbeni. Ukuba uqaphela ukuba ngexesha leseshoni ubushushu bomzimba wakho bunyuka kakhulu okanye uqaphela ukuba ulusu lwakho luba bomvu kakhulu, kuya kufuneka uyiphazamise iseshoni.
Xa uphume kwiseshoni yeediliya ungaze uncedise i-tan yakho ngokuchana nelanga. Kuya kufuneka uhloniphe ixesha lokungena okungenani iiyure ezingama-48 phakathi kweeseshoni ezimbini zemitha ye-UVA.
Izibonelelo zokusebenzisa imitha ye-UV
Iindawo zokuhlala ze-UV zikuvumela ukuba ufezekise loo yunifomu kunye nokuhlala ixesha elide. Ulusu lunokubonisa i-tan efunwayo nangaliphi na ixesha lonyaka. Imitha ye-UVA iyingozi xa sisebenzisa kakubi ukusetyenziswa kwayo, okanye singayisebenzisi ngokuchanekileyo. Kodwa ikwanazo neenzuzo zayo, kuba inxulunyaniswa nayo yonke into enxulumene nolusu kunye nolusu oluthile luncedo:
Kwisikhumba esinevitiligo isebenza kakuhle. Abantu abanale meko banamabala amhlophe kulusu lwabo lonke emzimbeni. Njengonyango olunyangayo, ukufotowa okubangelwa yimitha emincinci ye-UVB kunokusetyenziswa.
Unyango lwepsoriasis. Esi sifo solusu asinyangi, kodwa iimeko zaso zinokuncitshiswa ngonyango lweziyobisi zidityaniswe neminquba yokushuka. Kule meko, azifumaneki kwii-solariums, kodwa zibane izibane zediliya ezibizwa ngokuba yi-PUVA.
Nangona kunjalo, soloko ufuna eyona ndlela yokufumana isikhumba sisebenzisa ukusetyenziswa komlinganiso noxanduva. Ukusetyenziswa gwenxa kwemitha ye-UVA kuneziphumo ezibi kwimpilo yolusu ekuhambeni kwexesha. Kodwa ukuba siyenza ngokuchanekileyo singabonisa loo tan intle esiyithandayo kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iikhabhathi ze-UV: iingcebiso kunye nezilumkiso
Iikrismesi zekrisimesi zosapho lonke